The Gardener: A to Z by Zephyr (2)
A to Z by Zephyr (2)
E for Enlightenment
အသိအမြင်ပြောင်းတာမျိုးပေါ့ ... အလင်းဓာတ်ရတယ်၊ တရားပေါက်တယ် ... စသဖြင့်ပြောကြတယ်။
Age of enlightenment လည်းသမိုင်းမှာရှိခဲ့ဖူးတယ်။ လူတွေဟာ အလင်းပွင့်တဲ့အခိုက်တွေရှိတယ် ....။ အဲဒီအချိန်လေးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ဘ၀ဟာ ပြောင်းလဲသွားတယ် ....။ တစ်သက်လုံး မြင်လာတဲ့အမြင်ကို ဖြတ်ခနဲပြောင်းလဲသိမြင်သွားတဲ့ကာလငယ်လေးလို့ပြောနိုင်မယ်ထင်တယ်။ မိမိကိုယ်ကို သိမြင်လိုက်ရတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးတွေမှာ ... လူဟာ အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားတယ် ...။ အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ကို ကွဲကွဲပြားပြားသိရတဲ့အခါ အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အရာတွေကို နားလည်လက်ခံလိုက်နိုင်တဲ့ အသိလေးတစ်ချက်ဟာလည်း အလင်းပွင့်မှုတစ်မျိုးပဲ ....။ ဘာကိုမှမကျေမနပ်ဖြစ်မနေတော့ဘူး ....။ ရနေတာကိုရောင့်ရဲတယ်။ နေနေရတာကို အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ် ...။ ဘ၀ကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ အလင်းကလေးဖျတ်ခနဲလက်သွားသလို ဘ၀ကိုမြင်ပုံပြောင်းသွားတယ်။ အရင်က လိုချင်တာကို လောဘလို့ပြောတာကို စွဲနေမိတယ်။ နောက်တော့ အရှင်ဇနကာဘိဝံသရဲ့ ကုသိုလ်ပြုဖို့ လိုချင်တာကို လောဘလို့မခေါ်ဘူး။ နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာဟာ လောဘမဟုတ်ဘူး ဆန္ဒပဲဆိုတာကိုဖတ်လိုက်ရတော့ လောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်သက်လုံးမှတ်ထားတာကပြောင်းသွားတယ်။ အသိဥာဏ်အရ ကျေကျေနပ်နပ်နားလည်လိုက်ရတိုင်း ကျေနပ်မှုရတယ်။ ... လူဟာ တကယ်သိလိုက်ရတာကို အရသာ အရှိဆုံးလို့ခံစားရတဲ့ သတ္တ၀ါတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။
F - Forever and ever ...
အဲဒီစကားလုံးလေးကို သဘောကျတယ် ...။
ထာဝရ ရဲ့ ထာဝရ ...
မင်းအနားမှာရှိနေမယ်ဆိုတဲ့ Bon Jovi ရဲ့ Always ထဲက Forever ကိုလည်း တော်တော် ထိရောက်တဲ့ကြေငြာတစ်မျိုးလို့တွေးမိတယ်။ Forever and ever တန်ဖိုးထားရတဲ့တစ်ခုခုရှိရင် ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးရော သံသရာ တစ်လျှောက်လုံးရော စိတ်ချမ်းသာနေမယ်ထင်ပါတယ်။
G - Geek
သိပ်တော်တဲ့သူတွေနဲ့ ငကြောင်တွေကို ခေါ်ပါတယ်။
မနေ့က Alice In Wonderland ကြည့်ပါတယ်။
အဲဒီမှာပါတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်။ ငယ်တုန်းက သိပ်ပေါတာပဲလို့ထင်လို့ Retold ကိုတောင်ပြီးအောင်မဖတ်ခဲ့တာသတိရပါတယ်။ အဲဒီမှာ မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုပဲ အိမ်မက်မက်တတ်တဲ့ Alice ကို သူ့အဖေက အားပေးတဲ့အခန်းကိုကြိုက်ပါတယ်။ အဲဒီစကားနဲ့ပဲ သူက The Mad Hatter (Johnny Depp) ကို အားပေးလိုက်ပါတယ်။
Mad Hatter : Have I gone mad?
Alice : I am afraid so, you are entirely bonkers. But I'll tell youasecret. All the best people are.
ဒီ dialogue လေး ကို သဘောကျပါတယ်။ သိပ်တော်တဲ့ ကြောင်တောင်တောင်လူတွေ၊ အရူးတွေလို တစ်ခုခုမှာ စူးနစ် နှစ်မြှပ်ပြိး သဘာဝတရားနဲ့ကင်းကွာနေသူတွေ ... သမားရိုးကျလူတွေရဲ့ ငကြောင်လို့ပြောရတဲ့နေရာမှာ ပြုံးပြုံးလေးရပ်နေတဲ့သူတွေ .... အဲဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုလည်းတွေးမိပါတယ်။
Jason Mraz ရဲ့ Geek in the Pink လေးဖွင့်လိုက်ပါဦးလားဗျာ ...။
H - Heffalump
Winnie the Pooh ထဲက ဆင်ကလေးပါ။ အထွေအထူးမပြောတတ်ပါဘူး။ အဲဒီဆင်ကလေးမြင်ရရင် စိတ်ချမ်းသာလို့ပါ။ Piglet ကို ကြောက်တဲ့ ဆင်ကလေးပါ။ သဘာဝတရားထဲမှာ နေတဲ့ ခပ်အအကောင်လေးတွေကို သဘောကျပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း နည်းနည်းထုံထုံအအဆိုတော့ .... ခပ်ထုံထုံကာရိုက်တာဆိုရင်ကို ကိုယ်ချင်းစာပြိး တော်တော်လေး ခင်နေတတ်ပါတယ်။
အခု စဉ်းစားနေတဲ့ quotes က
Jean-Paul Sartre ရဲ့
"Man is condemned to be free." ဆိုတဲ့ Quotes ပါပဲ။ အဲဒါဘယ်လောက်မှန်လဲဆိုတာတော့ I အကျွန်ုပ်သည် don't know
မသိပါဟူသော အခြင်းအရာသည် ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍ လာသည်။
J - Jesus and Jack Sparrow
Both have long hair and both have their audience ...
Both used boats.
Children love them.
He is the king I respect most.
ဘာလိုချင်သလဲလို့သူ့ကိုမေးတဲ့အခါ ... သူက ငယ်ရွယ်တဲ့အတွက် အသိဥာဏ်နည်းမှာကြောက်လို့ အသိဥာဏ်ပဲတောင်းဆိုခဲ့တယ်။
အဲဒီလို လူငယ်လေးတွေအများကြီးရှိရင် အဲဒီတိုင်းပြည်တွေ သိပ်ကို တိုးတက်လာမှာပါ ....။
L - (Living Together လို့ရေးလိုက်ရင် ဘလော့ခ်လောကမှာ ... အနည်းငယ်ပြောစရာဖြစ်သွားနိုင်တယ် ...:P) Loyalty ပဲထားလိုက်ကြရအောင် ကျမ်းလေးသွားမှာစိုးလို့ ....။
Loyalty ကို သစ္စာရှိတယ်... သဘောထားမြဲမြံတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အလုပ်မှာဆိုရင်လည်း ကိုယ့်အလုပ်ကို သစ္စာရှိတယ် ...။ ဆိုလိုတာက တစ်ရာ နှစ်ရာတိုးပေးရုံနဲ့မပြောင်းဘူး။ ချစ်သူရည်စားဆိုလည်း ကြည့်မရမဖြစ်မခြင်း ချစ်တယ်၊ သစ္စာရှိနိုင်သရွေ့ရှိကြတယ်။ တစ်ချို့လူတွေရဲ့သစ္စာတရားက ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိတယ်။ လိုအပ်ရင် ပြောင်းပြန်ပြောင်းနိုင်တယ်။ .... သစ္စာတရားက နည်းသထက်နည်းလာတယ်၊ ဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေသောက်တာတောင် အသုံးမကျတဲ့ နွယ်မြက်သစ်ပင်တွေစားသလောက်ပဲ အာနိသင်ပြတော့တယ်။ သစ္စာဆိုလိုက်တော့လည်း ကမ္ဘာကြီးဟာ ပူမြဲအတိုင်းပူလို့ပါပဲ ....။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သစ္စာရှိတဲ့သူနဲ့ သစ္စာမရှိတဲ့သူရဲ့ လမ်းခွဲတိုင်းဟာ ထင်သလောက်ကြေကွဲစရာမကောင်းနိုင်တော့ဘူး .....။....သစ္စာဆိုတာ ပန်းတွေပဲလား။ သစ္စာဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်ပဲလား။ သစ္စာဆိုတာ သစ္စာနီမှာ နီပြုတ်သွားတာလား။ သစ္စာဆိုတာ ၂၁ ရာစုရဲ့ သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်ထဲက ဖုန်တက်နေတဲ့ ရည်းစားစာလေးတစ်စောင်ပဲဖြစ်တယ်။
M- Mom ...
MOM ဆိုရင်တော့ Ministry of Manpower ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်
အခုတော့ အမေ ဆိုတဲ့ Mom ပါ။
သိပ်မလိမ်မာတဲ့သားတွေဟာ အဖေထက် အမေကို ပိုချစ်ပါတယ်။ ဒီလူ့ကို ဘာလို့ အိမ်မှာတင်ထားတာလဲလို့ ငယ်တုန်းက ခဏခဏတွေးပါတယ်။ အဖေဆိုတာကတော့ အမေ့လို ချစ်စရာမကောင်းလှပါဘူး။ သူ့အလုပ်သူလုပ်နေတဲ့ အသက်ခပ်ကြီးကြီးလူပါပဲ။ မိဘ၀တ္တရားတွေဖတ်ကြည့်တော့လည်း သူ့အလုပ်က စီးပွားရှာ မုန့်ဖိုးများများပေး ... ခပ်ဝေးဝေးမှာနေ ....အဲဒီလောက်ပဲ။ အမေကတော့ မတူဘူး ....။ အမေကတော့ သိသိသာသာပိုချစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ ... အရမ်းကောင်းတဲ့အမေရှိတယ်လို့ ခံစားရတဲ့အတွက် ... ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ကံကောင်းသားပဲလို့ ခံစားရပါတယ်။ အမေမရှိရင် ငတ်နိုင်တယ် ...။ အမေရှိသရွှေ့တော့မငတ်နိုင်ဘူး လို့ယုံကြည်တယ်။ အဲဒီလိုရေးထားတဲ့စကားပုံကိုလည်းသိပ်ကြိုက်တယ်။ ... အမေတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာကို ခံစားရရင် အဲဒီလူဟာ လောကကြီးကို သိပ်အဆိုးမမြင်တော့ဘူးလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ အမေမရှိတဲ့သူတွေရှိပါတယ် ...။ သူတို့ဘ၀ဟာ အမြီးပြတ်နေတဲ့ငှက်လိုပဲ .... ပျံလို့ပဲရတယ် ...။ကွေ့ချင်တိုင်းကွေ့လို့မရတော့ဘူး။ ထိန်းကျောင်းလို့မလွယ်တော့ဘူး ....။ မေလမှာ အမေများနေ့ရှိပါတယ်။ အမေများနေ့အတွက် ကဗျာတွေရေးတယ်။ ရေတွေ၊ သွေးတွေ လှူတယ်။ တခြားဟာတွေလည်းလှူနိုင်တာလှူတယ် ...။ အမေတွေအားလုံးကို လေးစားချစ်ခင်တဲ့အတွက် သူတို့အားလုံးး စိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်။ အမေ့ဘ၀မှာ သား၊သမီးတွေကြောင့် မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်တွေမကျစေချင်ဘူး ...။ အမေတွေအားလုံးဟာ သားသမီးတိုင်းအတွက် ....အကောင်းဆုံး အတူယူစရာ သူတော်ကောင်းတစ်ယောက်စီဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ....။
A to Z by Zephyr
Elite တွေမွေးထုတ်ပေးနေသော Zephyr